Khayraadka - Wadashaqaynta Tucson Pima si loo Joojiyo Hoy La'aanta
HALKAAN HOOS KA BADAN TODOONKA: mycommunitypt.com/pima
DHAMMAAN QOYSKA GURYAHA
Raadi qof kaa caawiya dayactirka ama dib u helida guri.
Caawinaad dheeri ah
U adeegso warqad xajmig ah si aad ugu daabacato dokumentiyada Caawinta
Ma u baahan tahay faa iido laakiin aad wali rabtaa inaad shaqeyso?
Adeegso badhannada hoosta ku yaal si aad u aragto sida ku kasbashadaadu saamayn ugu yeelanayso macaashkaaga.
Xisaabiyaha SSI - Mushaharka kaliyaXisaabiyaha SSI - Dakhliga aan La ShaqeysanXisaabiyaha SSDI
Hel Cunno Kulul
Bangiga Cuntada ee Beesha
Waxa kale oo aad daawan kartaa nooca daabacan ee Qodobbadayada Helitaanka adigoo gujinaya xiriiriyaha hoose.
Caawinaada Ka Hortagga Saarida
Cusub Maarso, 2017: Biilka adeegga iyo kaashka deeqaha ee macaamiisha Southwest Gas iyada oo loo sii marayo The Primavera Foundation Faahfaahinta hoose.
TPCH ma bixiso adeegyo toos ah. Waxaan nahay iskaashi ka shaqeynaya ka hortagga iyo joojinta hoy la'aanta. Fiiri ilaha kor ku yaal si toos ah ula xiriir bixiye adeeg ama booqo websaydhka xubnaheena ee hoosta.
Ka jawaab su'aalaha qaar oo hel liiska barnaamijyada guryaha ee aad xaq u yeelan karto. Raadi meelo jaban oo aad kireysato. Hel macluumaad ku saabsan ilaha kale sida xuquuqda kireystaha iyo milkiilaha guriga, la talinta la wareegida guryaha, kirada iyo kaalmada korontada, iyo inbadan.
Macluumaadka Bulshada iyo Adeegyada Gudbinta waa isha ugu muhiimsan ee macluumaadka isku dhafan si dadka iyo adeegyada la isugu keeno si loo daboolo baahiyaha muhiimka ah. Si aad u hesho caawimaad wac 2-1-1 ama booqo www.211arizona.org
Xogta kale & Cilmi baarista
Isbahaysiga Qaranka oo Joojiya Hoy La'aanta - Xaaladda guri la'aanta ee Mareykanka 2016
Waaxda Amniga ee Arizona - Guri la’aanta Arizona, Warbixinta Sannadlaha ah ee 2015